Culimada Soomaaliyeed: Isqarxinta iyo laynta rayidka Islaamka sal kuma lahan – Radio Muqdisho
Ka dib weerarkii waxshinimada ahaa ee maleeshiyada Alshabaab ku qaadeen hoteelka Maka Almukarrama iyo weerarradii ka horreeyay oo dad rayid ah oo aan waxba galabsan kooxdu ku xasuuqday, waxay culimada Soomaaliyeed si adag uga hadleen weerarradaas.
Culimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si aad ah u cambaareeyay falalka is qarxinta ah ee maleeshiyada Alshabaab ku kacayaan.
Sheikh Cabdullaahi Axmed garruun oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka qeyb galayay barnaamijka Tubta Toosan ee Radio Muqdisho ayaa caddeeyay sida Islaamku ay xaaraan ugu tahay Is qarxinta iyo laynta dadka aan waxba galabsan.
Sheikha ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay doodda maleeshiyada argagixisada ah ee Alshabaab ee ah in kuwa falalka isqarxinta geysta ay yihiin mujaahidiin ama Shuhado.
Waxa uuna Sheikh Garruun tilmaamay in kuwa is qarxinaya ee dadka rayidka ah xasuuqaya aysan Islaam iyo Jihaad midka sal ku lahayn, balse ay yihiin dambiilayaal, gacan ku dhiigleyaal iyo kuwo geystay dil xaq darro ah.
Barnaamijka oo dhammeystiran ka dhageyso qeybta hoose